लाइभ टिभीमा बोल्दा-बोल्दै गयो सास ! हेर्नुहोस् भाइरल भएको मृत्युको भिडियो ! – Medianp
लाइभ टिभीमा बोल्दा-बोल्दै गयो सास ! हेर्नुहोस् भाइरल भएको मृत्युको भिडियो !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २९, २०७५१६:४०0
मृत्युलाई एक अनियन्त्रित प्राकृतिक अवस्थाको रुपमा लिने गरिन्छ। जन्म लिएको जुनै पनि जनावर मर्ने पर्ने प्राकृतिक नियम रहेको छ। केहीले सुखद मृत्यु पाउने गर्छन् भने केहिले तड्पिएर मृत्युलाई आत्मसाथ गर्ने गर्छन्।
यस्तै मृत्युले एक भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बन्न पुगेको छ। भारतकी एक साहित्यकारको मृत्यु क्यामरामा कैदनै भएको थियो।प्रसिद्ध लेखिका एबमं जम्मू-कश्मीर अकादमीको पूर्व सचिव प्रोफेसर रीता जतिंदरको मृत्यु क्यामरामानै कैद भएको हो। जम्मू-कश्मीरमा रहेको दूरदर्शनको एक लाइभ टीवी शोको समयमा उनको निधन भएको हो।
प्राप्त जानकारीका अनुसार उक्त लाइभ कार्यक्रममा उनि महिलाहरुको विषयमा बोलिरहेकी थिइन्। कार्यक्रममा महिला अधिकारको बारेमा चर्चा गर्दा-गर्दै उनको बोलि रोकिएको थियो। बोलि रोकिएको देखेर धेरै चिकित परेता पनि उनको मृत्युले भने धेरैको होसनै उडाएको थियो। उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम सास लिंदै गरेको दृश्य पनि क्यामरामा कैद भएको हो।
मृत्यु हुनेक्रममा उनको सास गएको दृश्य समय क्यामरामा कैद हुन पुगेको थियो। अहिले उक्त भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरलनै भैरहेको छ। हेर्नुहोस् उनको मृत्युको भिडियो :
बुगी वुगी बिजेता कविता नेपालीको पहिलो म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
करिब ३ घण्टा यौन आनन्द दिन्छ प्याजले, कसरी प्रयोग गर्ने ? जानी राखौ !
बिकीनी लगाएकी युवती देखेपछि सुँगुरले गर्यो यस्तो हर्कत
निर्वाचनको लहर चल्दै गर्दा भारतमा राहुल गान्धीमाथि हत्याको प्रयास भएकै हो त ? हेर्नुहोस् भिडियोमा यस्तो देखियो
जादु गरेर अरुलाई चकित पार्ने सोचको साथ रुखमा बाधिएका व्यक्ति दुईवर्षपछि भेटिए यस्तो अवस्थामा
बिहिवार भुलेर पनि नगर्नुहोस यी काम, नत्र हुनसक्छ ठुलो दुर्घटना !
घरमा बालेको बत्तिको पैसा तिर्न नसकेपछि सडकमा बलिरहेकाे बत्तिमा गएर होमवर्क गर्छन् यी बालक (भिडियो सहित)